MIRARY TAOM-BAOVAO SAMBATRA HO ANTSIKA REHETRA – MyDago.com aime Madagascar
MIRARY TAOM-BAOVAO SAMBATRA HO ANTSIKA REHETRA
Ny ekipan’ny MyDago.com rehetra dia miarahaba antsika rehetra nahatratra ny farany ary mirary antsika rehetra ihany koa hahatratra ny taona vaovao 2014, enga anie ka hitondra fanambinana, sy fahombiazana antsika ny taona vaovao. Miarahaba manokana ny filoha Ravalomanana mianakavy noho izao asaramanitra izao. Andriamanitry ny fiadanana anie hitahy sy homba ny fiainareo hatrany.
13 pensées sur “MIRARY TAOM-BAOVAO SAMBATRA HO ANTSIKA REHETRA”
Ary i Dokotera angaha tsy mba mahazo fiarahabana manokana?
Mihinam_bary aza misy latsaka: »koa dia miarahaba anareo mianakavy ihany koa A/toa filoha J.L.R & Ra8 ary ny ankohonanareo avy,mahereza sy matanjaha @adidy masina ihantsoroanareo,homba antsika mianakavy anie JEHOVAH A/TRA & JESÔSY KRISTY TOMPO »
miarahaba antsik tsik e!miarahab manokana an’i DADA sy NENY sy ny fiankavin rehetr,ny Filoha JLR mivad sy ny fianakavin,ar ny zanak’i dada rehetr e!hitondr soa sy fandresen ar fanambinana ho antsik ty 2014 ty!mrar fet sambatr dol e!
Rediredy tsy ilaina valiana !!!!!!
Aza mamaky an’ireny hoa,enregistreo reny anarana reny de tonga de ny manaraka vakiana aleo ho sasatra ny hiova pseudo ao
Courage fona fa tsika tsy mivadika @fahamarinana zany mitsy,ary manoana ny dada,J.l.r & zay mitovy hevitra aminy
Mihevitra mantsy hianareo foza fa ho tafa-petraka eo io Hery io? Ndao fa ny diavolan-ko lava ny lalao mbola ho ela.
Miarahaba an’i Dada Valo sy Neny Lalao ary Dr JLR sy ny ankohonany avy. Adidy goavana ho an’ny firenena no niantsorohanareo nandritra iny taona 2013. Mankasitraka fa mbola misy olona tia tanindrazana vonona ny hijoro h@ farany. Ny ahy Kaominina kely vitsivisty tany amin’ireo Distrika telo tao vakinankaratra no mba nanaovana propagandy ho an’ny JLR fa tena reraka tanteraka aho. Fantatro ny faharerahanareo ary ny herim-po sy herin-saina lany Miala tsiny mitantara izany fa adidy amin’ny mahaolom-pirenena tanteraka no nanaovako izany fa tsy nisy antony hafa satria tsy hoe nirotsaka député na hafa.
Miarahaba ny zan’i Dada rehetra sy ny antoko havana ihany koa ary mirary fetin’ny taom-baovao mahafinaritra.
Miarahaba an’i dada sy nena MALALA tratry ny taona
FIADANAN I TOMPO ANIE HOMBA SY HITAHY ANAREO MIANAKAVY!
miarahaba an’i Mydago koa dia hitohy hatrany ny fiarahana raha tsy mibolisatra.
Miarahaba ny akama rehetra koa.
Andriamanitra tsy manary ny olony e!!!Dia ny Anjely mpiambina hiambina an’i Dokotera ilay
hiraky ny lanitra.
1 janvier 2014 à 7 h 35 min
Miarahaba anao Dada sy Neny, ary dokotera Jean Louis nahatratra ny taona 2014. Ho taom-pandresena ho antsika tia tanindrazana anie ity taona vaovao ity. Ny marina tsy mba maty koa mahereza ary mahatanjaha. Ny Tompo anie homba anareo. Ary aza adino fa izahay dia tena mitrotro am-bavaka ho anareo manakavy . Minoa fotsiny ihany fa Izy irery ihany no marina. Azy ny fahefana sy ny hery. Hoy aho hoe Mahereza fa izahay vahoaka matoky anareo. Tsy maintsy afaka @ ‘ny ziogan’ny frantsay anie Madagasikara. ( ‘za tena alérgique n’ireto frantsay mpangalatra ireto).
1 janvier 2014 à 7 h 45 min
Miarahaba ny mpisera rehatra ihany koa nahatratra ny taona 2014. Mahereza daholo fa isika tsy naman’ny mihemotra. Mirary taom-baovao 2014 ho taom-baovao ho antsika mianakavy araka ny fahamarinana!
Mba mety koa heno eto i JLR , tsy saribakoly ééé
2 janvier 2014 à 4 h 42 min
Faly miarahaba antsika namana mavitra rehetra eto @Mydago eee,d mirary indrindra raha mirary mba ho taona zina ho an’ny fahafahana ity taona ity.Ho ela velona anie ny Vahoaka Malagasy.
Précédent Article précédent : HALABATO BE VATA
Suivant Article suivant : MOVANSA RAVALOMANANA : NANATITRA FITORIANA TENY AMI’NY CES